Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay hadallo qabsaday baraha xiriirka bulshada | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay hadallo qabsaday baraha xiriirka bulshada
Xilli ay sare u sii kaceyso xiisaadda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, isbuucyadii la soo dhaafay ayuu qalalaasahan galay wajiyo cusub.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, oo khudbad dheer jeediyey mar uu la hadlayey shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dooxa, ayaa u muuqday in uu ka hadlayay khilaafka taagan, wuxuuna sheegay in aanan marnaba lagu qasbi Karin wax aan sax ahayn.
Hadal ka mid ahaa khudbadda Ra’iisul wasaare kheyre ayaa noqday mid ay si gaar ah dadka isticmaalaha baraha xiriirka bulshada diiradda u saarayeen, iyagoo soo qaatay jumladdiisii ahayd “Na af garta ayay na leeyihiin, haddii kale waan idin rideynaa”.
heerkii ugu xumaa ayey toddobaadyadii la soo dhaafay gaareen xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo aaamul goboleedyada, halka hoggaamiyeyaasha mucaaradkana ay sii wadeen dhaliilaha ay u jeedinayaan dowladda.
Dhawaan waxaa Aqalka Baarlamaanka federaalka loo gudbiyay Mooshin ka dhan ah Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in kastoo uu muran xoog leh dhaliyay Mooshinkaas.
Waxaa sidoo kale jiray xiisado siyaasadeed oo hareeyay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay ka jirto doorasho madaxtinimo oo lagu kala aragti duwanyahay.
Waxayse cirka isku sii shareertay markii dowladda Federaalka ay Baydhabo kasoo xirtay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu-Mansuur, oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartameysay jagada Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Hase yeeshee dowladda kama aysan qoomamayn, xitaa markii ay rabshadaha dadka ku dhinteen labada maalmood ka socdeen magaalada Baydhabo.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in dalka u soo maray wajiyo kala duwan, xukuumaddiisana ay waddanka ugu timid iyadoo ay dadkii ka horreeyey soo dadaaleen meelna ay soo gaarsiiyeen balse meesha la soo gaarsiiyey aysan ahayn meel ay caalamka kula jaanqaadi karto, “Dhaqanka aan ugu nimid ma ahan mid lagu amaani karo, aniga iyo madaxweynaha waxaan go’aansannay inaan ka madax banaanno qabyaaladda iyo musuqmaasuqa.”
Waxa uu intaas ku daray in kaliya dhibaatada laga bixi karro haddii dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay wada shaqeeyaan, “Waa taariikh cusub in wali qof Soomaali ah uusan bannaanka ka maqlin 21-kii bilood ee aan wada joognay madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Khayre ayaa wada shaqayn waayey.”
goor sii horreysay ayey ahayd markii dowladda Federaalka Soomaaliya ay xabsiga dhigtay qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ka dib markii lagu eedeeyay inay ka shaqeynayaan sidii dowladda loo dumin lahaa.
Ra’iisul wasaaraha oo u muuqday in uu u jawaabayo dadka siyaasadda kaga soo horjeeda ayaa yiri “waxan idin balanqaadayaa inta aan xukunka joogno inaannaan yeeli doonin in nala cabsiiyo oo dariiqa saxda ah nalaga leexiyo, in nala yiraahdo nala shaqaysta ama waan idinka ridaynaa xukunka, inta aan madaxda nahay, anigoo ku hadlaayo kayga iyo kan madaxweynaha, sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqableyaal, waxaan ka raadineynaa shacabka Soomaaliyeed.”
Previous articleDAAWO, Prof Cabdi Ismacil samatar oo Si Adag Uga hadlay xadhiga Roobow iyo xaaladaha Barlamaanka Ridaya farmaajo iyo Arinka cakiran ee Baydhabo,
Next articleMadaxweynaha Eritrea Oo Booqasho Ku Tagay Imaaraadka , Laba Maalin Kaddib Markii Uu Ka Laabtay Muqdisho